Imakethe yamabhande e-Yiwu itholakala ku-yiwu internatial trade city district 4, ivulwa ngo-9 ekuseni kuye ku-5 pm Le makethe ihlanganisa abathengisi abangaphezu kuka-10000, okuhlanganisa izitayela ezahlukene nezinto zokwakha ezifana nebhande lendoda, ibhande labesifazane, ibhande lesikhumba sangempela, ukotini. nelineni blet, ibhande PU, PVC ibhande nokunye.
IZICI ZAMABHANDLA E-YIWU
Amabhande e-wholesale e-China asatshalaliswa emakethe ye-wenzhou nase-guangzhou ekuqaleni, iheha womabili lawa mabhizinisi amabili edolobha eze ku-yiwu ukuze amise amafasitela okuthengisa ngokuthuthuka kwawo okuqhubekayo namandla anethonya elinamandla.Izimboni eziningi zamabhande zaze zathuthela izimboni zazo kwi-yiwu.
Cishe i-60% yenziwe e-china ukuze ikhiqize amabhande emhlabeni wonke, nokho ibhande elingu-70% likhiqizwa ezimakethe zamabhande e-yiwu.Lolu suku lubonisa ukuthi imakethe yamabhande e-yiwu isivele ingenye yemakethe enkulu yamabhande e-China.
Ezinye izitolo zithengisa amabhande abesilisa kuphela, imibala yazo eyinhloko ansundu namnyama.
Manje umphakathi wethu ukhuthaza ukuvikela indawo ezungezile, ngakho-ke izinto zokwakha ngokuvamile ziyi-PU ne-PVC, kukhona nezitolo zamabhande esikhumba zangempela, kodwa hhayi eziningi njenge-PU ne-PVC.
Amabhande esikhumba anamanani ahlukene ezimfanelo ezihlukene , intengo yesikhumba senkomo yesibhakela iphakeme, iyahlukahluka kusuka ku-25 RMB kuya kokungaphezulu kancane kuka-30RMB.Intengo yesikhumba Sesibili ihluka kusuka ku-16 kuya ku-24, amanani amabhande e-PU aphansi kakhulu.
Funda kabanzi mayelana nemikhiqizo
Izitolo zamabhande abesifazane zibukeka zinemibala eminingi.Imibala miningi ngendlela ongayicabanga.Eziningi zazo ngezokuhlobisa nje.
Ezinye zincane kakhulu futhi zinhle, ezinye zibanzi kakhulu futhi zikhulu;Ezinye ngamaketango ensimbi, ezinye ngentambo yokweluka;Ezinye zinamakristalu acwebezelayo;Ezinye zinemibhalo emihle.
Njengamabhande abesilisa, izinto ezisetshenziswa kakhulu yi-PU ne-PVC.
Ngokuvamile, kunezinhlobo ezintathu ze-buckle:
Ibhande yenaliti, elisetshenziselwa umzimba webhande onezimbobo.Ibhande elizenzakalelayo namabhande abushelelezi, okungamabhande angenazimbobo.
Ezinye zalezi zibopho ze-alloy zikhiqizwa e-GuangZhou, zibukeka zicwebezela ngekhwalithi enhle.
Lapho ithunyelwa eYurophu naseMelika emazweni angaphandle, ayadingeka angenabuthi, ngakho-ke amabhakede ensimbi awanayo i-nickel.